သင်မသိသေးတဲ့ ကြက်ဥ တစ်နေ့ ၂လုံးစားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ...! - Thadin
HomeHEALTHYသင်မသိသေးတဲ့ ကြက်ဥ တစ်နေ့ ၂လုံးစားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ…!
March 15, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on သင်မသိသေးတဲ့ ကြက်ဥ တစ်နေ့ ၂လုံးစားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ…!
ကျန်းမာရေး သတင်းတွေ ဆောင်းပါးတွေ ရေးနေကျ Bright Side မီဒီယာက ကြက်ဥအကြောင်းကို သုတေသနလုပ်ထားပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့ ဆဲလ်တွေက Choline နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်က Choline ဓာတ်တွေ လုံလောက်စေဖို့အတွက် အဓိက ကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ ၂လုံးစားရင် အဟာရပြည့်ဝကာ ဒီဓာတ်တွေလုံလောက်ပါတယ်။ Choline ဓာတ်တွေ လျော့နည်းနေရင် မှတ်ဥာဏ်အားနည်းတာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
ကြက်ဥတွေမှာ Lutein ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်တွေက မျက်စိ အမြင်ကို ကြည်လင်ပြတ်သားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ အကယ်၍ Lutein ဓာတ်တွေ ချို့တဲ့ရင် မျက်လုံး တစ်ရှူးတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲ မျက်စိအမြင်ကို အားနည်းစေပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို ငါးကြီးဆီ တစ်ဇွန်းသောက်မလား၊ ကြက်ဥ တစ်လုံးစားမလားလို့မေးရင်တော့ ကြက်ဥတစ်လုံးစားမယ်လို့ ပြန်ဖြေကြတာများပါလိမ့်မယ်။ ကြက်ဥက ငါးကြီးဆီတဲ့ အရသာပိုကောင်းတာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဗီတာမင် D ပါဝင်တဲ့ ပမာဏချင်း တူညီကြပါတယ်။ ဗီတာမင် D က ကယ်ဆီယမ် ဓာတ်ကိုပိုရရှိအောင် ကူညီပေးကာ အရိုးနဲ့ သွားများကို သန်စွမ်းကျန်းမာစေပါတယ်။
အသားအရေ၊ ဆံပင်နဲ့ အသည်းရောဂါကို ကာကွယ်ပေး
ကြက်ဥမှာ ပါဝင်တဲ့ Biotin, Vitamin B 12 နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေက အသားအရေနဲ့ ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ကြက်ဥတွေမှာပါဝင်တဲ့ Phospholipids ဓာတ်က အသည်းထဲမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ မနက်စာကို ကြက်ဥတွေနဲ့ ရောပြီးစားသုံးရင် ကိုယ်အလေးချိန် သာမန်ထက်တောင် ၂ ဆလောက်ကျစေတယ်လို့ အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ကြက်ဥပါတွဲစားတဲ့ မနက်စာစားထားရင် အချိန်ကြာကြာ ဗိုက်ပြည့်နေတာကြောင့် နေ့လည်စာမှာ သာမန်ထက်လျော့စားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ ကိုလက်စထရောက ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးမပေးတဲ့ ကိုလက်စထရောဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုလက်စထရောထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ချပေးပါတယ်။ ကြက်ဥမှာ omega-3 အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ချပေးပါတယ်။
ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျော့ချပေး
ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ Choline ဓာတ်က ဦးနှောက်အတွက် ကောင်းမွန်ရုံသာမက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုပါ လျော့ချပေးပါတယ်။ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ နေ့တိုင်းကြက်ဥစားပေးတဲ့အမျိုးသမီးက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ၁၈ % လျော့နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့ သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ ကြက်ဥကို တစ်နေ့ ၂လုံးစားပေးတဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်ကနေ ၄၀ ကြား အမျိုးသမီးများ ၏ ၈၇%မှာ အသားအရေ တင်းရင်းပြီး အစက်အပြောက်တွေ နည်းပါးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကနျြးမာရေး သတငျးတှေ ဆောငျးပါးတှေ ရေးနကြေ Bright Side မီဒီယာက ကွကျဥအကွောငျးကို သုတသေနလုပျထားပွီး ထုတျပွနျခဲ့တဲ့အကွောငျးကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
ဦးနှောကျရဲ့ ဆဲလျတှကေ Choline နဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျက Choline ဓာတျတှေ လုံလောကျစဖေို့အတှကျ အဓိက ကပြါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈနကေို့ ကွကျဥ ၂လုံးစားရငျ အဟာရပွညျ့ဝကာ ဒီဓာတျတှလေုံလောကျပါတယျ။ Choline ဓာတျတှေ လြော့နညျးနရေငျ မှတျဉာဏျအားနညျးတာတှေ ဖွဈစပေါတယျ။
ကွကျဥတှမှော Lutein ဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ဒီဓာတျတှကေ မကျြစိ အမွငျကို ကွညျလငျပွတျသားအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။ အကယျ၍ Lutein ဓာတျတှေ ခြို့တဲ့ရငျ မကျြလုံး တဈရှူးတှေ ပုံမှနျမဟုတျတော့ဘဲ မကျြစိအမွငျကို အားနညျးစပေါတယျ။
သငျမသိသေးတဲ့ ကွကျဥ တဈနေ့ ၂လုံးစားခွငျးရဲ့ ကောငျးကြိုးမြား
လူတဈယောကျကို ငါးကွီးဆီ တဈဇှနျးသောကျမလား၊ ကွကျဥ တဈလုံးစားမလားလို့မေးရငျတော့ ကွကျဥတဈလုံးစားမယျလို့ ပွနျဖွကွေတာမြားပါလိမျ့မယျ။ ကွကျဥက ငါးကွီးဆီတဲ့ အရသာပိုကောငျးတာကွောငျ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ ဗီတာမငျ D ပါဝငျတဲ့ ပမာဏခငျြး တူညီကွပါတယျ။ ဗီတာမငျ D က ကယျဆီယမျ ဓာတျကိုပိုရရှိအောငျ ကူညီပေးကာ အရိုးနဲ့ သှားမြားကို သနျစှမျးကနျြးမာစပေါတယျ။
အသားအရေ၊ ဆံပငျနဲ့ အသညျးရောဂါကို ကာကှယျပေး
ကွကျဥမှာ ပါဝငျတဲ့ Biotin, Vitamin B 12 နဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတှကေ အသားအရနေဲ့ ဆံပငျကနျြးမာရေးအတှကျ အထူးကောငျးမှနျပါတယျ။ ကွကျဥတှမှောပါဝငျတဲ့ Phospholipids ဓာတျက အသညျးထဲမှာရှိတဲ့ အဆိပျအတောကျတှကေိုဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
ကယျလိုရီနညျးတဲ့ မနကျစာကို ကွကျဥတှနေဲ့ ရောပွီးစားသုံးရငျ ကိုယျအလေးခြိနျ သာမနျထကျတောငျ ၂ ဆလောကျကစြတေယျလို့ အမရေိကနျသိပ်ပံပညာရှငျတှကေ တှရှေိ့ထားပါတယျ။ ကွကျဥပါတှဲစားတဲ့ မနကျစာစားထားရငျ အခြိနျကွာကွာ ဗိုကျပွညျ့နတောကွောငျ့ နလေ့ညျစာမှာ သာမနျထကျလြော့စားမိမှာဖွဈပါတယျ။
ကွကျဥမှာပါဝငျတဲ့ ကိုလကျစထရောက ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆိုးကြိုးမပေးတဲ့ ကိုလကျစထရောဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအပွငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကိုလကျစထရောထုတျလုပျမှုကို လြော့ခပြေးပါတယျ။ ကွကျဥမှာ omega-3 အကျဆဈဓာတျပါဝငျတာကွောငျ့ နှလုံးရောဂါ ဖွဈပှားမှုကို လြော့ခပြေးပါတယျ။
ကငျဆာ ရောဂါဖွဈပှားနိုငျခကြေို လြော့ခပြေး
ကွကျဥမှာပါဝငျတဲ့ Choline ဓာတျက ဦးနှောကျအတှကျ ကောငျးမှနျရုံသာမက ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားနိုငျခကြေိုပါ လြော့ခပြေးပါတယျ။ သုတသေန ပွုလုပျခကျြအရ နတေို့ငျးကွကျဥစားပေးတဲ့အမြိုးသမီးက ရငျသားကငျဆာဖွဈပှားနိုငျခြေ ၁၈ % လြော့နညျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
နယျသာလနျနိုငျငံရဲ့ သုတသေနပွုလုပျခကျြအရ ကွကျဥကို တဈနေ့ ၂လုံးစားပေးတဲ့ အသကျ ၃၅ နှဈကနေ ၄၀ ကွား အမြိုးသမီးမြား ၏ ၈၇%မှာ အသားအရေ တငျးရငျးပွီး အစကျအပွောကျတှေ နညျးပါးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
This Month : 37402
This Year : 232800
Total Users : 591824
Total views : 2715897